Sedax maamul Goboleyd oo laga hergalinaayo mashruucyo waa weyn | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sedax maamul Goboleyd oo laga hergalinaayo mashruucyo waa weyn
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa daahfuray mashruuca ballaaran ee Farsamada,Xirfadaha iyo Tababbarada ee TVET+ oo markii u horreysay dalka laga hirgelinayo tobanaan sano ka dib.
Mashruucan waxaa laga fulin doonaa wajigiisa koowaad saddexda Dawlad-gobolleed ee Galmudug,Hirshabeelle iyo Koonfurgalbeed, waxaana maamul kasta laga hirgelinayaa xarumo farsamo oo si casri ah u qalabeysan. Waxaa lagu baran doonaa xarumahan oo loo yaqaano (TVET+) hannaanka barashada farsamada gacanta ee dalka Jarmalka.
Ujeeddada ugu weyn ee mashruucan uu diiradda saarayo ayaa ah shaqaalo xirfad leh, tallaabadaa oo lagu gaarayo kobac dhaqaale.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo ka hadlay mashruucan ahmiyadda uu u leeyahay horumarinta Bulshada ayaa sheegay muddada uu socday inay ka faa’iideysan doonaan boqollaal bulshada qeybaheeda ah oo u badan dhallinyaro. Wuxuu u mahadceliyay Dawladda Jarmalka oo mashruucan ka taageeraysa Soomaaliya,isagoo inta ku daray inay Dawladda Soomaaliya ka go’antahay horumarinta xirfadaha.
“ Daahfurka mashruucan TVET+ ee xoojinta Shaqaalaynta iyadoo loo marayo Waxbarashada Farsamada,Xirfadaha iyo Tababbarka oo laga hirgelinayo saddexda Dawlad-gobolleed waa qorshe ballaaran oo aan xal ugu raadineyno baahida xirfadaha ee ka jirta dalka iyo in lagu dhimo shaqo la’aanta.” ayuu yiri Wasiir Duraan.
Munaasabadda daahfurka mashruuca oo ka dhacday xarunta Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, oo ay goobjoog u ahaayeen saraakiil ka tirsan Wasaaradda iyo xubne kale oo uu saameynta ku leh mashruuca, waxaa habka fogaan aragga uga qeybgalay saraakiil ka tirsan Dawladda Jarmalka, hay’adaha fulinaya, maamulka gobolka Mudug ee Dawlad-gobolleedka Galmudug oo xarunta ugu horreysa ee dugsiga Farsamada laga hirgelinayo.
Previous articleHuman Rights Watch oo n ciidamada Itoobiya ku eedaysay duqeyn gobolka Tigray
Next articleSenetarada xil ka xayuubinta markii labaad ku sameynaya Donald Trump oo soo bandhigeen muuqaal argagax leh
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Boqortooyada dalka Sucuudiga ayaa jawaab ka bixisay warbixin kasoo baxday sirdoonka Mareykanka oo lagu sheegay in dilkii loo geystay Wariye...
Hospital Martiini musiibo oi ka jirta dadkii waxaa loo la yahay...
Puntland iyo Jubbland oi Gudi Doorasha Soomagacaabay